people Nepal » किन भेटेनन् ओली प्रचण्ड ? खटपटको आशंका किन भेटेनन् ओली प्रचण्ड ? खटपटको आशंका – people Nepal
किन भेटेनन् ओली प्रचण्ड ? खटपटको आशंका
काठमाडौं, पुस १२ । वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता एक:अर्काको भूमिकाप्रति आशंका गर्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच केही दिनयता प्रत्यक्ष भेटघाटसहितको संवाद हुन नसक्दा आशंका र अविश्वास जन्मिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।